Nzira dzekudzorera iyi Thanksgiving
Kuzvipira panguva yemwaka wezororo inzira inoshamisa yekuunza mhuri pamwechete kana kukurudzira vechiduku kuti vawane kufarira muhupiro uye hutungamiri hwevanhu. Mikana yokuzvipira mu Sacramento yakasiyana nedzinza reguta racho pachayo, rine zvakawanda zvekuda kune vemhuka, mhuri dzine vana vaduku nezvimwe.
Zvingwa & Fishes
Zvipira pane iri downtown rinonzi Sacramento soup kicheni inoshandisa vanopfuura 1 000 vanozvipira pamwedzi.
Kune maoko mazhinji-mubasa rinofanira kuitwa, kusanganisira zvokudya zvekudya, kubika, kushumira nekuchenesa. Iwe unogonawo kuzvipira kuti unyore kutenda mavara, kudzidzisa pachikoro chavo chavo kana kuti kubasa pabazi rebasa paWoid Friendship Park. Vose vanozvipira vanofanira kuva nemakore gumi nemana kana kupfuura uye vanodikanwa kupinda kune vanozvipira pakuisa nzvimbo.
Vana Kuwana Musha
PaSacramento Kubata Vana Musha, kune mikana yekuzvipira yekuzvipira, pamwe nemaoko-mukana wekushanda nevana pachavo. Vose vanozvipira vanofanira kunge vava nemakore makumi maviri nemashanu kana kupfuura uye vanoponesa vanhu vanowanikwa minwedzi uye DOJ. Mimwe yemikana yekuzvipira yevaya vanoshandisa chiso nechiso nevana inosanganisira avo vanogona kuunza unyanzvi chaihwo patafura - zvichida kudzidzisa dhani, unyanzvi, yoga, yemitambo kana mitambo.
Royal Stage Chiitiko chechiKristu Chiito
Iyi yekambani yekambani yekambani inowanikwa muRoseville, uye nguva dzose iri kutsvaga vadzidzisi vanozvipira, vadzidzisi uye vanobatsira vabatsiri.
Vanotarisa mabasa avo kuvana nevakadzi vechidiki vechidiki avo vakapukunyuka maitiro akasiyana-siyana okutsvaga, kusanganisira avo vakabuda mukutengesa.
Iva munhu mukuru wekudzidzisa nekunyora, kubatsira nezviitiko kana basa pakurongeka nekunyora pabazi rako rekuraibhurari. Kune nzira dzakawanda dzekubatanidzwa, uye zvakare inzira yakanaka yekuwana rugare nerunyararo.
Enda paIndaneti kuendesa chikwata, kana chengeta VolunteerMatch peji yavo yemikana yekupedzisira yekuzvipira iripo.
Une rudo kune mhuka here? The Front Street Animal Shelter mu Sacramento ine mikana yemhuri yose yekuzvipira. Vaya vane makore 16 nepamusoro vanogona kuzvipira munzvimbo dzose, asi avo vane makore 12-15 vanogona kunyoresa purogiramu chaiyo yevechidiki kana kuti vanozvipira pamwe chete neshamwari yechikuru. Vana vari pasi pemakore gumi nemaviri vanogona kuramba vachizvipira nguva kuburikidza nemitambo yekupa zvipo, mhuka inobata bhegi zvinhu uye nezvimwe.
Sacramento Food Bank inozivikanwa nokuda kwayo Inoenda Kupa Vane nzara mangwanani ose okuonga, uye izvi zvinotora boka revanhu vanozvipira kupfeka. Iko kunewo mikana yokuzvipira yevechidiki nevakuru mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana kusanganisira zvipo zvekupa, kugovera mauto, kutungamira uye nezvimwe.
Batsira varume nevakadzi kuSacramento Senior Safe House - vose vakaramba vachirwiswa uye vari kungomirira mumwe munhu achiuya pamwe chete kunyemwerera uye nekukurudzira. Iwe unogona kuzvipira munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kubika, kuchenesa uye ushamwari.
Sacramento Volunteer Websites
Kana uchida kuzvipira nguva, asi uchiri kunyatsoziva kuti ungaenda kupi, kune vashoma vanofananidza mawebsite ane mazamu akawanda anowanikwa mukutarisira Thanksgiving neKrisimasi.
Dunhu reNorthern California neNorthern Nevada ye sangano rose renyika rinoshandisa mikana yeSacramento-nzvimbo kuburikidza newebsite yavo. Chengetedza kunze uye fungidzira kumikana ipi inoshanda kwauri.
Guta re Sacramento Volunteers
Guta reS sacramento rinopa mikana yakawanda yekuzvipira iyo inopesana mune zvose zvinoda kuzvipira uye vanhu vanoshanda. Mapoka akawanda emaguta anoendesa mberi vanozvipira vanoda pano, pamwe nemasangano akawanda ega ega muSadramento.
Iko chaizvoizvo mazana emikana mu Sacramento yakabva pane tsvakurudzo yaunopinda mu VolunteerMatch. Sevaya vari vatungamiri vanozvipira vanofananidza webhusaiti, vanoshumira mupata zvakanaka mune zvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira vana, dzidzo, utano hwehutano uye vakwegura. Chero zvingave zvipo zvako, kune nzira yekuvhara neyero ino.
Iyi Kubonga, usangodya chete uye tarisa mutambo - pane kudaro, ufuridzirwa nekubatsira avo vasina ruzivo. Hapana mhedziso kune zvaunogona kuita, kunyange kana iwe unganzwa sekunge usina chaunogona kupa. Buda ipapo uye ushandira nharaunda yako yega-iwe uchanzwa wakakura kuti waita.
Top Sacramento Ice Creameries
Heino Rubatsiro rweSakramento Yenyu yekuonga
Kuchenjerera Kwakachengeteka kana Kurapa mu Sacramento
Sacramento March Zviitiko Calendar
Ndezvipi Ndege dzeIndaneti Ndizvo Zvakaitwa muna 2017?
Top Top Picks Toys Story Fans at Disney World
Kushanyira New York Stock Exchange
Mhosva uye kuchengeteka muJamaica
Kuronga Cruise Mazano Okugadzirira Vagadziri uye Scooter Users
Kubatana kweMakungwa Sneak Peak
The Red Psycho Llama Eco Hostel mu Miraflores, Lima
A Photo Tour yeColonial Williamsburg
Burgundy Uncorked: Beaune uye Burgundy Wine Region
Montreal Wine Show La Grande Tariro 2017
Chibage Mazes ku Long Island, NY
Kufara Zviitiko munaSeptember muSalt Lake City
Virginia Foods: Specialty Foods muVirginia
Nyorera ku Mystical Kumbh Mela muIndia